यो भविष्यको घर हुनेछ सजाउनुहोस्
कसरी गर्ने भविष्यको घर? विगत शताब्दीको दौडान हामीले हाम्रो घरको जीवन बदल्न सक्ने टेक्नोलोजिकल प्रगतिहरूको श्रृंखलाको बारेमा कल्पना गरेका थियौं। केही आज एक वास्तविकता हो। अरूलाई पहुँचयोग्य हुन र हाम्रो घरहरूमा ठाउँ खोज्न अझ बढी समय चाहिन्छ। एक पटक उनीहरूले गरे पनि, यो रहिरहनेछ।
यो कल्पना गर्न गाह्रो थियो कि केही वर्ग सेन्टीमिटरमा जुन स्मार्टफोनले ओगटेको छ, हामी यति धेरै अनुप्रयोगहरू मिलाउन सक्षम हुनेछौं। न्यानो टेक्नोलोजीले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरेको छ र साथै हाम्रो घरहरू पनि परिवर्तन गर्दछ। मोबाइलबाट बत्तीहरू खोल्दै र यस उपकरणको प्रयोग गरेर ब्लाइन्डहरू बढाउनु पहिले नै वास्तविकता हो। तर सबै कुरा चारैतिर घुम्दैन न्यानो टेक्नोलोजी र घर स्वचालन भविष्यका घरहरूमा। भविष्यको घर मा, स्थिरता, ऊर्जा बचत र रिक्त स्थान को बहुमुखी प्रतिभा पनि एक प्राथमिकता हुनेछ।
हाम्रो लागि जीवन सजिलो बनाउन आभासी सहायकहरू पहिले नै हाम्रो घरमा आएका छन्। ऊर्जा बचत प्राथमिकता हो किनकि यसको प्रयोग पनि हो टिकाऊ सामग्री। भविष्यको घरले रिक्त स्थानको वितरण र फर्निचरको बहुमुखी प्रतिभामाथि पनि पुनर्विचार गर्दछ। के हामी यति धेरै परिवर्तनहरू आत्मसात् गर्न सक्षम हुनेछौं? हामी यो गर्छौं यदि हामीले यो याद राख्यौं कि घरेलु रूपान्तरणहरू क्रान्तिकारी छैनन्; तिनीहरूलाई आउन गाह्रो छ।
1 खाली ठाउँहरू, खुला र बहु-फंक्शनल
2 मोड्युलर र मोबाइल फर्नीचर हावी हुनेछ
3 हाम्रो घर स्मार्ट घर हुनेछ
4 यो लगभग शून्य ऊर्जा खपत हुनेछ
5 यो दिगो हुनेछ
खाली ठाउँहरू, खुला र बहु-फंक्शनल
भविष्यमा घरहरू कम्पार्टेरलाइज्ड हुने छैनन् जस्तो कि अहिले छन्। वातावरण डेलिमिट हुनेछ, तर अधिक लचिलो र बहुमुखी प्रणाली यसको लागि प्रयोग हुनेछ। हालका वर्षहरुमा, प्रणाली संग विकसित गरीएको छ मोबाइल मोड्युलर घटक त्यो स्थानलाई तीन वा चार क्लासिक कोठाको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
को मल्टीफंक्शनल रिक्त स्थान वा रूपान्तरण गर्ने क्षमताको साथ भविष्य हुन्। किन? यसका थुप्रै कारणहरू छन्। पहिलो, ठूला शहरहरूमा घरहरूको संख्या बढ्दै गएको। दोस्रो, अझ बढी दक्षताका साथ प्राकृतिक प्रकाशको फाइदा लिन आवश्यक छ।
भान्सामा क्रान्ति सुरु भएको छ। नयाँ घरहरूमा भान्साको घर छोडेर ठाउँ बनाउँदैन जहाँ सबै चीजहरू हुन्छन्। यसमा सामान्य सिरेमिक सामग्रीहरू काठको तातो को लागी हेर्छन र यसलाई स्वागत गर्ने ठाउँ प्राप्त गर्न यसको सम्झना गराउँदछ। परिवर्तन, तथापि, त्यहाँ रहनेछैन।
मोड्युलर र मोबाइल फर्नीचर हावी हुनेछ
आज हामी फर्नीचरको एक टुक्रा सोध्छौं जसका लागि यो डिजाइन गरिएको थियो। भविष्यमा, प्रयोगको अतिरिक्त, हामी उनीहरू बहुमुखी हुनु आवश्यक छ र ती सेवाहरू प्रदान गर्दछ, स्मार्टफोनले गरे जस्तै उस्तै तरीकाले। हो, भविष्यमा फर्निचर पनि "जडान" हुनेछ।
ठूला शहरहरुमा जनसंख्या को एकाग्रता को कारण घरहरु सानो र साना भएको छ। यी अनुकूलन गर्न को लागी, फर्नीचर आज सानो र अधिक बहुमुखी छ। र भविष्यको फर्निचरले त्यस प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदछ। तिनीहरू प्रतिक्रियाको लागि अधिक दक्षताका साथ ठाउँको फाइदा लिन डिजाइन गरिनेछ परिवर्तन आवश्यकताहरु र दुई वा तीन कार्यहरू पूरा गर्न।
सामग्रीको मामलामा, रिसाइक्लि processes् प्रक्रियाहरूमा नवीनताले निर्माताहरूलाई प्रयोगको लागि अनुमति दिनेछ नयाँ सामग्री धेरै फरक अपशिष्टबाट प्राप्त। एयरोनटिक्सको विशिष्ट सामग्री, मोटर वाहन उद्योग र वास्तुकलाको अन्त्य हुनेछ, ठूलो वा कम हदसम्म, फर्निचरको रूपमा घरमा प्रवेश हुनेछ।
हाम्रो घर स्मार्ट घर हुनेछ
अलेक्सा, गुगल सहायक, सिरी, Cortana ... भर्चुअल सहायक तिनीहरू भविष्यमा एक अर्को रूममेट हुनेछन् र तिनीहरू कार्यहरूको एक समूहको जिम्मेवार हुनेछन्। हाम्रो आवाजको साथ हामी प्रकाशको तीव्रता परिवर्तन गर्न, ब्लाइन्डहरू कम गर्न वा केही सेकेन्डमा उनीहरूको वितरण परिवर्तन गर्न आदेश दिनेछौं।
सबै भन्दा परिष्कृत घर स्वचालन र प्रविधि घर संगैaप्रदान गर्दछ संचार नेटवर्क यसले हामीलाई कम्तिमा दुई उपकरणहरू र स्मार्टफोनको माध्यमबाट कार्यहरू स्वचालित गर्न अनुमति दिनेछ। यो केवल एक उपकरण जडान को कुरा होईन, तर टेलिफोन लाई अन्य तत्वहरु लाई जोड्ने कुरा जस्तै इलेक्ट्रिकल उपकरण, सुरक्षा प्रणाली, वातानुकूलित, तातो इत्यादि।
यो लगभग शून्य ऊर्जा खपत हुनेछ
अब गर्मी घाटाबाट बच्नुहोस् घामको ताप को लाभ उठाउनुहोस् र यो दैनिक जीवनमा बासिन्दा द्वारा उत्पन्न भविष्यमा प्राथमिकता हुनेछ। प्रायद्वीप एक त्यस्तो क्षेत्र हो जुन युरोपको सबै भन्दा धेरै घण्टा घामको घाम हो। यदि स्पेनिश नियमहरूले सूर्य उत्पादनको साथ ऊर्जा उत्पादनलाई दण्ड दिन रोक्छ भने, परिवर्तन नजिक हुन सक्छ।
हामी उपकरणहरूको साथ बिजुली बिलमा बचत पनि गर्नेछौं जसले हामीलाई यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न मद्दत गर्दछ। बत्तीहरू खोल्ने र बन्द गर्ने वा प्रकाशको चिसो वा तातो टोन परिवर्तन गर्नका साथै ट्याब्लेटबाट वा भ्वाइस सहायकको साथ, हामी सक्दछौं। प्रकाश नियमन गर्नुहोस् स्वचालित रूपमा दिइएको कोठामा प्राकृतिक प्रकाशको सँधै परिवर्तन हुने प्रविष्टि अनुसार।
यो दिगो हुनेछ
भविष्यको घरको डिजाइन हुनेछ यसको प्राकृतिक वातावरण अनुकूल छ र यसको कृत्रिम वातावरणको साथ नेटवर्क। सीओ २ उत्सर्जन दुवै यसको निर्माणमा र यसको प्रयोगमा कम हुनेछ र जैविक विविधतालाई बचाउन माइक्रोसिस्टम वास्तुकलामा नै एकीकृत हुनेछ।
थप रूपमा, विषाक्त यौगिकहरू, विकिरण र चुम्बकत्वको अन्त्य हुनेछ, यसका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नेछ र अझ राम्रो स्रोत व्यवस्थापन प्राकृतिक र फोहर सूर्यको प्रकाश, वर्षाको पानी र भूतापीय ऊर्जाको प्रयोगको साथ।
सडक लामो हुनेछ, तर ती सामग्रीहरू हुन् जस्तो देखिन्छ कि वास्तुकार, डिजाइनर र वैज्ञानिकहरूले भविष्यका घरहरूमा काम गर्नेछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » डिजाइन » यो भविष्यको घर हुनेछ
सबै शैलीहरूमा कुर्सि खाने
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको घरमा पुस्तकालयको लागि ठाउँ छैन भने, फेरि सोच्नुहोस्!